Hosen’i Houcine tsara ny fitsarana… - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Isan’ny olona voatonona ity mpampanoa lalana. Tsy naharitra ity farany fa nitafa tamin’ny mpampita vaovao. Toa izao no fandraisan’ny poety iray izay nambarany.
Dray dray dray drayyyyy !!!
Dia niampanga tena, ianao ramatoa
Nilaza ampahibemaso fa tena nisy tokoa
'Lay vola roa valizy, nomen'i Arfa
Mba hamoahana azy, ho afaka amin'ny gadra.
Dia hoe tsy nanaiky ianao, ka nalefanao nivoaka
'Lay mpanao kolikoly, navelanao hitsoaka
Kanefa anie ianao ka mpampanoa lalàna e
Tena olona ambony ao amin'ny fitsarana !
Te-hanadio tena ianao, dia indro fa nanilika
'Lay volan'i Arfa, any amin-dramatoa minisitra
Ity farany hatreto, tsy sahy miseho tele
Satria vao maika nalentikao, amin'ity dosie !
Tena mampanongo tena, ianareo madama a
Na ramatoa minisitra, na ianao mpampanoa lalàna
Nareo tokony ho fitaratra, ohatra, modely
Manao fomba mamohehatra, tena tsy mamely.
Mahantra ianao ry Dago, mahantra olo-marina
Tsy ho ato ho ato mihitsy, fa mbola ho ela vao hotafarina.
*** fanasina7 *** 051901181355
Dia tsy mifarana ny tantara
Tsy nangina Houcine fa nikafara
Dia namaly ireto taty afara
Nandre ny poety ka nizara
Izay reny nambaran’ny minisitra
Dia indro re fa nitsikafona
'Zay noheverina fa niafina
Tsy mba vola amin'ny Ariary
Fa tena €uro avy hatrany
Saingy angamba diso tia tena
D'izao nipoaka ny afera
Mety nisy tsy nahazo anjara
Ka nanabaribary ny tantara
i Arfa lazaina fa tsy hita
Manao ampamoaka any am-pita
Ary tena manitrikitrika
Fa nanome vola an'i Minisitra.
Raha ny endrikao Ramatoa
Sy ny taonanao ihany koa
Dia tena mandiso fanantenana
Fa hay mpanitsakitsaka lalàna
Nefa minisitry ny fitsarana !
Tokony ho kinga, vetivety
Ianao hamory mpanao gazety
Momba ity tantara ity
Eny, na dia ho fiatsarambelatsihy
Saingy, tsy nataonao izany
Midika fa marina avy hatrany.
Ny filohanao ihany koa
Sy ilay nomerao faharoa
Dia mangina tsy ahitan-teny
Toa ny olo-moana ireny
Fa notampenan'i Arfa ny daomy
'Lay gadra 'zao no lasa "raoly"
"Ôsy ah' e madama a !"
Ny vahoaka anie tsy adala e
Efa be dia be no mahalala
Manaraka akaiky 'ty tantara
Raha izao no tena hofotorina
D'ianao no tokony hosamborina
Ianao no tena tsy mamely
Fa tsy i Dada velively.
*** fanasina7 *** 031701180552
Tsy naharitra ity mpanoratra iray ka nizara ny alahelony. Nahoana no tsy ampitoviana “torosy” manoloana ny fitsarana ny tsirairay ? Ny nijoboka nangalatra akoho avy hatrany dia midoboka fa izay mangalatra harem-pirenena ireo mpitsara indray no mihenahena…
Aty am-pigadrana no nametrahana ahy
Lavitry ny fiainana, nilaozan’ny fanahy
Meloka aho, ekeko, tsy nety ny nangalatra
Ka inoako, any taona mbola hiverina ho sambatra
Henoko ombieny, be ny mpangalatra avo lenta
Ny ahy akoho gasy sy manendaka poketra
Fa ny azy ireo "hono" vola be toy ny "Milliards"
Tsy mba ariary intsony fa "Euros" sy ny "dollars"
Henoko hoe nidoboka, navoakan’ny gazety
Ireo anaran'olona nangalatra sy fetsy
Efa ho 1 taona izao, tsy mbola tonga aty ihany
Fa afindrafindra toerana any ambadimbadika any
Vao haingana koa izay nisy anarana voatonona
Nanao risoriso fa nahafantapantatr'olona
Tafavoaka teto Dago, nisy ny nanampy tosika
Sahy nanao fanambarana, sady tsy taitra no tsy rototra
Ka ahoana ihany izany, izay mangalatra ny kely
No faizina sy idina, tsy hanam-bava hiteny
Fa izay mangalatra ny be, efa ho vola iray vata
No diso lasa marina satria naman'ny ao an-dapa
Baritafika 17 Jan 2018
Dia manaraka ity tantara sinema ity ny maro. Soritana fa mbola vao saison 1 isika izao ary épisode faha 6 angamba (épisode voalohany fanafarana an’i Houcine, faharoa fanagadrana…). “Machiro” hoy ny fanoratan’ny tanora azy eny amin’ny tambazotra. Fa mba ahoana kosa ny vidim-piainana ? Misandratra…
Lafo ny vary, tsy voavidy ny laoka ;
mitrongo vao homana ity ny vahoaka !
Ny karama anefa, zara raha misy;
saozanina, mangozohozo ny ankizy!
Voamaina no harapaka, efa ho isan’andro,
lasa foto-tsakafo ihany koa ny mangahazo!
Tsy menatra intsony ny mitsongo anana,
dia ny ana-madinika eny amoron-dalana!
Voasazy ny ankizy fa miha-dondrona,
tsy omena tsiny fa tsisy ny atokona e!
K’aza dia hasarotina re ramose a,
ny kibo hono izao mbola refona be!
Ny jiro hanaovan-devoara aza moa,
tsy voavidin’ilay dimampolo ankiroa,
ny kahie lany tsy voasolo intsony,
k’ilay “aotra” azo, tsy mba sitra-pony e !
Taim-bavan-dRasoa efa mila tsy ho tanty,
ny hofan’ny trano, ilainy hono mantsy!
Ny entana ity efa ho lany tamingana,
ny fandriana namidy aza efa nanahirana!
Raha tsy maintsy hitrosa, any amin’iza ?
ny havana akaiky aza efa mila akisa!
Dia hanampy isa ny mpatory an-tsena e,
fa fetr’andro vitsy no azony ekena!
Ny aza mba misy marary ihany koa a,
vatam-paty no omanina dieny mialoha!
Satria hialangalana ireo hôpitaly,
tanam-polo hono mantsy tsy hahatsabo marary!
Mafy ady no anarany, izay ve no anjarany ?
Asa rey olona, fa efa tsy ho zakany!
Sanatria ve hono hatramin’ny taranany,
no handova tsy satry an’ity tsy fananany ?
Nitiah Nosy 21/01/18
Dia nosen’i Houcine tsara hatrany antampon-doha ka hatrany ampaladia ny Fitsarana hatrany amin’ny minisitra ka hatrany amin’ny mpiandry fonja. Nahazo ny azy koa ny filoham-pirenena. “Mitehafa tanana” hoy ny mpitsikera. “Dia ahoana koa ny manaraka ?” hoy ny mpisera… Mbola tsy miakatra ny soratra koa samia velon’aina.